Orlistat （96829-58-2） Mugadziri wekutsigira fekitori
Lorcaserin hydrochloride hemihydrate (856681-05-5)
CMOAPI ine huwandu hwakazara hwezvinhu zvakagadzirwa zveOrlistat （96829-58-2）, uye ine huwandu hwese hwehutongi hwehurongwa.
Category: Kurera huremu
Orlistat poda Base Ruzivo
zita Orlistat powder
Kufarira White crystalline powder
Solubility nsoluble mumvura kana doro, soluble muAcetic acid, ethyl ester.
Molecular Weight 495.7 g / mol
Melt Point 50 ° C
Molecular Formula C9H7ClN2O5
Storage Temp 2-8 ° C Mahara
giredha Pharmaceutical Grade
Orlistat imishonga yemushonga inoratidzirwa yekurapa kufutisa pamwe neyakagadziriswa koriori yakaderedzwa uye kudya kwemafuta mashoma. Inotengeswa semushonga wepiritsi pasi pe orlistat zita rezita Xenical uye zvakare seanopfuura-the-counter anti-kufutisa mushonga pasi pezita rekutengeserana Alli.
Orlistat inogara kwenguva refu yemudumbu gastrointestinal lipase inhibitor iyo inonyanya kushanda kudzivirira kudyiwa kwemafuta. Orlistat ndiyo inogutsa lipstatin, inova inoshanda yakasikwa pancreatic lipase inhibitor. Orlistat yakapusa uye yakagadzikana nokudaro yakasarudzwa pamusoro pemubereki fomu lipstatin.
Orlistat inoshanda kuti ipe huremu hwekuremerwa uremu pamusoro penguva pamwe nekuderedza mafuta episikiti. Izvo zvakadaro zvinoshandiswa pamwe nedzimwe nzira dzekudzikisa uremu dzakadai dzakaderera-mafuta kudya uye kurovedza muviri. Kubatsira kwaro senge nechero imwe hurongwa hwekudzora uremu hakusi kwekukurumidza asi chirongwa chenguva refu, icho chinokurudzirwa navarapi.
Sezvo ichishanda nekudzivirira kunwa kwemafuta ezvekudya achivapa kuti vabudiswe asina kuchinjwa mutsvina yemunhu, kune zviitiko zvakakura zvezviitiko zvemudumbu zvinoitika nekushandisa kwayo. Iyi mhedzisiro inogona kushanduka kuita yakakomba uye yakaipa mhedzisiro zvakanyanya nekudaro nekuwedzera muyero. Kukunda kana kudzikisa mhedzisiro orlistat inofanirwa kutorwa pamwe neakaderera-mafuta chikafu pamwe nemultivitamin zvinowedzera.
Orlistat Inoshanda Sei & Inoitei Chaizvoizvo?
Orlistat inozivikanwa sekusarudza inhibitor pancreatic uye gastric lipases. Aya ma enzymes (gastric uye pancreatic lipases) ndiwo anokonzeresa kuputsika kwe triglycerides (mafuta / lipid mumuviri) mumatumbu.
Orlistat inonyanya kuratidza mhedzisiro yayo mu lumen yemudumbu uye zvakare mudumbu dumbu. Orlistat inozivikanwa kusunga kune inoshanda serine masara saiti yegastric uye pancreatic lipases kuti igadzire covalent bond. Aya ma enzymes saka anomiswa uye anova asingawanikwe kune hydrolyze mafuta ekudya muchimiro che triglycerides mu fatty acids uye monogylcerides iyo inogona kupinzwa nyore nemuviri.
Kana chiitiko chavo chikadzivirirwa, iyo triglycerides inowanikwa kubva mukudya kwevanhu haina kushandurwa kuita mafuta acids ayo anokwanisa kunwiwa nemuviri. Naizvozvo, iyo triglycerides inoburitswa isina kuchinjika mutsvina yemunhu. Sezvo triglycerides isina kuchinjika isina kunyudzwa mumuviri, izvi zvinoguma zvaita caloric defence iyo inoita chinzvimbo mukudzora uremu.
Munguva pfupi yapfuura, orlistat yakawanikwa zvakare iri inhibitor ye thioesterase domain ye fatty acid synthase (FAS). Iyo enzyme, thioesterase, yakabatana nekuwedzera kwemaseru ane cancer asi kwete mukukura kwemasero akajairwa.
Ino orlistat inoshanda here kana usinga dye mafuta?
Zvakanaka, orlistat inoshanda kudzikisa huwandu hwemafuta anopinza mumuviri system. Saka hapana chikonzero chekutora orlistat paunenge uchidya chisina mafuta. Kana iwe uri pamushonga we orlistat uye ukatora chikafu chisina mafuta, iwe unorayirwa kuti usvetuke muyero kuti udzivise mhedzisiro.
Nekudaro, kana iwe ukadya chikafu chakanyanya kwazvo mumafuta, unogona kusangana neiyo orlistat mhedzisiro yakaipa dzakadai sesefu ine mafuta, ura hwemukati uye kuona kwemafuta.
Orlistat yakaratidza kudzikisira visceral mafuta?
Hongu, zvirokwazvo orlistat yakave yakaratidzwa kiriniki kudzikisa visceral mafuta. Alli (orlistat 60 mg) inogamuchirwa neKudya neDrug Administration (FDA) semushonga wepamusoro-wekare wekurapa kufutisa.
Zvidzidzo zvekuchipatara zvakaratidza izvozvo orlistat kwete chete inobatsira kuonda asi zvakare inoderedza zvakanyanya visceral mafuta. Yakawanikwa ichidzikisa chiuno chakakomberedza.
Mafuta eVisceral anonziwo anoshanda mafuta mhando ine ngozi yemafuta akachengetwa mukati medumbu mhango nekudaro anotenderedza akakosha mitezo yemukati senge chiropa, ura uye rwatata. Hepamusoro huwandu hwemafuta anoonekwa akabatanidzwa kumatambudziko mazhinji ehutano senge rudzi rwechipiri chirwere cheshuga, kusagadzikana kwemwoyo, mamwe makenza, hosha yeropa, uye chirwere cheAlzheimer.
Munguva yekuremerwa uremu, visceral mafuta ari pakati pemafuta ekutanga akarasika. Izvi zvinonatsiridza hutano hwako nekuderedza njodzi dzezvinetso zvakawanda zvehutano zvakadai seshuga, BP, uye kusagadzikana kwemoyo.
Mune chidzidzo chinosanganisira vatori vechikamu makumi maviri nematanhatu, orlistat 26 mg (Alli) yaiiswa katatu pazuva pamwe chete nekoriori yakadzikiswa, kudya kwemafuta mashoma kwemwedzi mitatu. Mhedzisiro yacho yakaratidza kuti, orlistat yaikwanisa kudzikisa zvakanyanya chiuno chechiuno inova chiyero chemafuta anoonekwa. Vakataura 60% kudzikira muhuremu hwemuviri uye 3% kudzikiswa kwemafuta echiratidzo.
Mune kumwe kuongorora, vanhu gumi nevaviri vane kufutisa vakapihwa orlistat katatu zuva nezuva kwemavhiki makumi maviri nemana. Ivo zvakare vakarairwa kuti vacherechedze yakaderera-mafuta kudya. Mushure memwedzi wechitanhatu, vatori vechikamu vakataura kuderedzwa kwehuremu hwemuviri hwe123% uye kuderedzwa kunoreva mumafuta evisiteral e24.
Ino orlistat inokanganisa chiropa kukuvara here?
Orlistat haina kuzivikanwa sechikonzero chaicho chekukuvara kwechiropa kwakanyanya mune ese pre-kiriniki uye kiriniki miedzo. Nekudaro, zvimwe zviitiko zvisingawanzoitika zveakanyanya orlistat kukuvara kwechiropa kwakataurwa nevanhu vakashandisa orlistat.
Orlistat inogona kudzikamisa mashandiro enzyme yakakosha inonzi carboxylesterase-2. Iyo enzyme, carboxyleserase-2 inoita basa rakakosha mukudzikisa hutachiona, itsvo uye nemudumbu wese wemudumbu. Kana iyi enzyme ikadzivirirwa inogona kukonzeresa kune huturu hwakakomba hwenhengo dzakakosha.
Chikafu neDrug Administration zvakadoma chakakomba kukuvara kwechiropa kwakanyanya sekuchengetedzeka maererano ne orlistat. Izvi zvinoenderana nezve gumi nematatu emakesi epashure-musika orlistat kukuvara kwechiropa mushure mekushandisa orlistat.
Mune zvidzidzo zvakaitiswa, orlistat haina kuwanikwa iri iyo inokonzeresa kukuvadza kwakakomba kwechiropa. Nekudaro, iyo ingangoita njodzi yeorlistat kukuvara kwechiropa yakabatana haifanire kufuratirwa. Izvo zvakanaka kuti ugare uchibvunza wako wezvechiremba mazano akanakisa usati watora orlistat kana chero mumwe mushonga.
Iko huru orlistat kubatsirwa kurasikirwa nekurema. Muchokwadi, orlistat kuora uremu ndiyo yekutanga uye inozivikanwa bhenefiti iyo inogadzirwa uye kushambadzirwa. Iyo inoshandiswa kurapa kufutisa uye kubatsira mukurema uremu.
Iwo orlistat mabhenefiti ndeaya:
Kufutisa uye kufutisa zvinoreva mafuta asina kujairika kana akawandisa anoungana mumuviri. Uku kuwandisa kwakanyanya kune njodzi huru yehutano. Chiyero chekufutisa ndeyemuviri mass index inowanzo kuverengerwa sehuremu hwako mumakirogiramu akapatsanurwa nekwere kukwirira kwako mumamita.
Kufutisa kunosanganisirwa nematambudziko ehutano senge kushushikana kwemoyo, chirwere cheshuga, mamwe kanzira uye kuwedzerwa kweropa. Neraki, kunyangwe huremu hushoma hwekuremerwa hunogona kudzivirira nyaya dzehutano dzakabatana nekufutisa.
Nomuzvarirwo, vanhu vakawandisa uye vakafutisa vanhu vanorasikirwa nehuremu kuburikidza nekutarisa pane chikafu, mararamiro anoperekedzwa nekurovedza muviri. Zvinodhaka kana kurasikirwa nemishonga inorayirwa kuti uperekedze mararamiro ane hutano senge yekuwedzera sarudzo.
Kurera huremu, zvisinei, hakugone kuwanikwa muusiku asi kazhinji chirongwa chenguva refu. Chirongwa chekuderedza uremu chinowanzo kuve nechikafu chakakodzera, kurovedza muviri, uye panodiwa mishonga. Chirongwa chekuderedza uremu chinowanzo fungwa senge chakabudirira kana iwe uchinge warasikirwa ne5 muzana kana kupfuura yeako pre-kurapwa huremu mukati megore rimwe. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kurasikirwa nehafu yekirogiramu mukati mevhiki yekutanga yekurapa. Uku kudzikisira kuonda kunoona kuti iwe unochengeta huremu kana kutozorasa huremu hwakawanda nehurongwa hwekureruka.
Orlistat inoshandiswa nekakoriori yakaderera uye kudya kwakaderera-mafuta pamwe nekurovedza muviri kunopa chirongwa chakasimba chekuderedza uremu. Orlistat, gastrointestinal lipase inhibitor, inogona kudzikisa huwandu hwemafuta ekudya aunotora ne25%. Orlistat inoshanda nekudzivirira iyo gastric uye pancreatic lipases. Aya ndiwo ma enzymes anoputsa mafuta ezvekudya (triglycerides) kuita fomati inonaya, mafuta acids kana monocerides.
Kana chiitiko cheaya maenzyme chakadzivirirwa, muviri haukwanise kutora macalorie asi mafuta acho anoburitswa asina kugayirirwa mutsvina. Ichi chinhu chakakosha mukudzora uremu.
Dzidzo dzinoverengeka dzekiriniki dzakaitwa uye dzichiratidza kuti orlistat kuora kurasikirwa mabhenefiti zvechokwadi ane simba.
Mune chidzidzo chinosanganisira 3,305 vatori vechikamu vaive vakafutisa, orlistat yakapihwa pa120 mg katatu zuva nezuva kweana makore. Ivo vatori vechikamu vakarairwa zvakare kunamatira kune yakaderera koriori chikafu isina inopfuura 4% yemakoriori. Ivo vakarairwa kurovedza muviri nekutora mafambiro zuva rega rega.
Ichi chidzidzo chakawana kuti, avhareji huremu hwakarasika mugore rekutanga hwaive ungangoita 10.6 kg. Kunyangwe hazvo ivo vatori vechikamu vakarema pamusoro pemakore matatu apfuura ekuyedzwa, kumagumo, avhareji uremu hwakarasika hwaive ungangoita 5.8 kg.
Mune imwe yegore rimwe chete yekudzidza orlistat yakapihwa yakawanikwa ichikonzera 5% kana kupfuura kurasikirwa uremu.
Mamwe mabhenefiti eatlistat anosanganisira;
Orlistat Deredza njodzi yerudzi rwechipiri chirwere cheshuga
Rudzi rwechipiri chirwere cheshuga kana chirwere cheshuga mellitus chirwere chakakomba chinokonzera shuga (glucose) metabolism mumuviri. Izvo zvinoitika kana miviri yedu isinganzwisise insulin. Insulin ndiyo hormone inoona nezve kudzora kuyerera kweshuga (glucose) mumuviri. Izvo zvinogona zvakare kuitika kana pancreas ikasaburitsa huwandu hwakakwana hwe insulin kuti ichengetedze iwo chaiwo glucose mazinga mumuviri.
Kunyangwe hazvo izvo chaizvo zvinokonzera insulin insensitivity isingazivikanwe, kunyanya kuwandisa ndechimwe chezvinhu zvinopa mukukura kwerudzi rwechipiri chirwere cheshuga. Nyora 2 zviratidzo zveshuga zvinogona kuve nyore kufuratira sezvavanokura zvishoma zvishoma, zvisinei, kana ikasarapwa inogona kutungamira kune mamwe matambudziko. Yepamberi mhando 2 chirwere cheshuga inogona kukonzeresa kune mamwe matambudziko akadai hypertension, chirwere chemwoyo uye chirwere chemwoyo. Zviratidzo nezviratidzo izvi zvinosanganisira kugara uchiita weti, kuwedzerwa nyota, kuonda zvisina kurongwa, kuneta, kusaona zvakanaka, kutapukirwa kazhinji, maronda anononoka kupora uye kusviba mune dzimwe nzvimbo dzeganda dzakadai mutsipa nemakwapu.
Orlistat yakakosha yekurasikirwa nemushonga saka inoita basa rakakosha mukudzivirira kutanga kwerudzi 2 chirwere cheshuga. Zvimwe orlistat modhi zviito zvakaonekwa kuti zvinoita chikamu chechipiri chirwere cheshuga zvinosanganisira kuwedzera insulin kunzwa, kudzora postprandial plasma isina-esterified fatty acids, kunonoka kana kudzivirira kugaya kwemafuta ekudya, kudzikisa visceral mafuta, uye kukonzera kuyerera kweglucagon-kunge peptide-2 mumatumbo maduku ezasi.
Mukudzidza nevanhu vakafutisa, orlistat inoperekedzwa nemararamiro ane hutano (kudya kwakaderera-mafuta uye kurovedza muviri) yakawanikwa ichideredza zvakanyanya zviitiko zverudzi rwechipiri chirwere cheshuga. Izvo zvakare zvakakonzera mukurasikirwa kukuru kwekurema.
Chimwe chidzidzo chakaitwa nevanhu vakafutisa kana vakafutisa vane chirwere cheshuga cheshuga. Orlistat 120 mg yaipihwa katatu zuva rega rega kwemwedzi mitanhatu kana gumi nemiviri.
Zvakawanikwa kuti kunze kweiyo orlistat uremu hwekurasikirwa, orlistat yakakwanisa kugadzirisa glycaemia kudzora. Iyo glycaemia parameter yakavandudzwa yaive yekudzikira mukutsanya plasma glucose (FPG) uye hemoglobin A1c (HbA1c). Iyo yakagadziridzwa glycaemia kudzora yaive yakazvimiririra nehuremu hwekurema.
Orlistat Inogona kudzikisa yakakwira BP
Kuwedzera kweropa uye inozivikanwa sehypertension chirwere chehutano chinoitika kana kuwedzerwa kweropa rako kuchikwira kusvika pamatanho akakwirira uye kazhinji kusvika kumazinga asina hutano. Iko kuwedzera kweropa kunowedzera kana iye arteri ikava nhete.
Kugara uchionekwa neBP kwakawanda kunogona kukonzera mamiriro ezvinhu asingagumi anokanganisa nhengo dzakakosha senge moyo, itsvo chero maziso. Zviratidzo zvakajairika zvehypertension ndezvekutemwa nemusoro, kubuda ropa pachiuno, kushanduka kwemaonero, dzungu, kurwadziwa pachipfuva, kufema uye kunyangwe ropa mumurini.
Orlistat inova lipases inhibitor inobatsira mukudzivirira kunwa kwemafuta ezvekudya anowanzo dzivirira tsinga. Orlistat saka inogona kudzikisira zvishoma kumanikidza kweropa kunowanzoitika nekuda kwekurema.
Mune chidzidzo chinosanganisira 628 vakafutisa kana kuwandisa vanhu vanotambura neBP, orlistat yakapihwa pa120 mg katatu pazuva kwegore rimwe. Varwere ava vaive neakakura asingadzoreke diastolic kumanikidza kweanosiana systolic kumanikidza. Mukuwedzera kune orlistat tsamba, varwere vatakakurudzira kuti vatarise kudya kwakaderera-kwemafuta kwenguva.
Chidzidzo ichi chakaratidza kuderera kwehuremu pamwe nekuderera mune zvese diastolic uye yakasarudzika systolic hypertension. Ivo vakanyora -9.4 mmHg kuderedzwa mu systolic hypertension uye -7.7 mmHg kudzikisira mune diastolic kumanikidza.
Izvi zvinoratidza kuti orlistat inogona kushandiswa mukutungamira kwehypertension mune vakanyanya kana kuwandisa vanhu.
Uku kuderedzwa kushoma mukukwirisa kweropa kwakabatana nekushandisa kwenguva refu kwe orlistat inoperekedzwa neakaderera koriori chikafu uye kurovedza muviri.
Mune kumwe kuongorora, iyo log-term kushandisa orlistat yakawanikwa kudzikisira zvishoma kudzvinyirira kweropa nekureva kuderedzwa kwe2.5 mmHg yesystolic kumanikidza uye 1.9 mmHg yedhiastolic reropa.
Orlistat Inoderedza yakazara uye LDL cholesterol
Iyo yakaderera-density lipoprotein cholesterol (LDL cholesterol) inowanzozodaidzwa kuti yakaipa cholesterol sezvo ichiunganidzwa mumadziro emidziyo yeropa nokudaro ichiwedzera njodzi yako yezvinetso zvehutano sekushushikana kwemoyo uye sitiroko.
Iyo yakazara cholesterol ine zvese zvakaderera-density lipoprotein (LDL) uye yakakwira-density lipoprotein (HDL) cholesterol. Iyo yakakwira iyo chikamu checholesterol yakazara inowedzera njodzi yekusagadzikana kwemoyo.
Orlistat yakanzi ideredze LDL cholesterol mukuwedzera kune yayo uremu bhenefiti.
Mune chidzidzo chinosanganisira varwere vakafutisa kana vakafuta, orlistat yakapihwa pachiyero che120 mg katatu zuva nezuva kwemavhiki makumi maviri nemana. Varwere vaive neBMI (body mass index) ye24-27 kg / m40 uye hypercholesterolemia (yakaderera-density-lipoprotein cholesterol, LDL-C, 2-4.1 mol / l).
Orlistat yakawanikwa ichinyanya kudzikisa huremu pamwe neuzere uye LDL cholesterol. Izvo zvakaratidzirwa zvakare kuti iyo LDL cholesterol yekudzikisa mhedzisiro yaive yakazvimiririra nehuremu hwekurasikirwa. Muchidzidzo ichi orlistat yaibvumidzwa zvakanaka kunze kwechiitiko chepamusoro chezviitiko zvemudumbu.
Mune kumwe kuongorora, vanhu mazana mana nemakumi mana nemasere vane huremu hwakawanda hwecholesterol vakapihwa orlistat pa448 mg katatu pazuva kweinenge mwedzi mitanhatu. Varwere vakarairwawo kunamatira kune yakadzikira koriori uye yakaderera-mafuta kudya. Izvi zvakakonzera kurasikirwa kwakakosha uremu pavhareji uremu hwe120 kg. Saizvozvowo, pakanga paine kuderera kukuru mucholesterol yakazara uye yakaderera-density lipoprotein cholesterol ne6-7.4 mg / dL.
Vakaenderera mberi vachitaura kuti orlistat cholesterol yekudzikisa mhedzisiro yaive yakazvimiririra kune orlistat kuyera kurasikirwa migumisiro.
Kusangana kwezvinodhaka zvinoreva maratidziro anoita zvinodhaka kana kufurira vamwe. Uku kudyidzana kwezvinodhaka kunokanganisa mashandiro anoita mimwe mishonga uye kunogona kuwedzera kuitika kwemhedzisiro yemigumisiro inosangana nekushandiswa kwemumwe mushonga. Orlistat kudyidzana nemamwe madhiragi kwakazivikanwa.
Kunze kwekudyidzana nemamwe madhiragi, orlistat haina kukurudzirwa kuti ishandiswe nevakadzi vane nhumbu kana vanoyamwisa. Izvo zvakare hazvishandiswe nevana vari pasi pemakore gumi nemaviri makore.
Izvo zvinokurudzirwa zvikuru kuchengetedza runyorwa rwemishonga kana mishonga uye kugara uchizivisa kune wako mupi wezvehutano mupi wezano rakanaka pane zvingangoitika kudyidzana. Idzi orlistat kudyidzana kwemishonga kunogona kukuvadza hutano hwako kupfuura mabhenefiti akatorwa. Naizvozvo, usatarise kusawirirana uku asi tora matanho.
Kumwe kwehukama hwekuzivikanwa orlistat ndewe;
Orlistat kudyidzana neropa vatete
Ropa rakapfava mishonga inoshandiswa pakurapa kumwe kushushikana kwemoyo uye mamiriro anokuisa panjodzi yekuvhara ropa kune ngozi. Vanowanzo batsira ropa kuyerera zvakanaka mumidziyo yeropa. Iyo zvakare inodzivirira kugwamba kubva pakuumba kana kukura.
Aya madete eropa anosanganisira warfarin, heparin, apixaban, dabigatran uye rivaroxaban powder pakati pevamwe.
Orlistat inogona kudzikisa kunwa kwevhitamini K. Vitamin K iboka remakemikari kureva Vitamin k1 uye vitamini K2. Vitamin K inoita basa rakakosha pakubatsira ropa kuti rigwamba uyezve kudzivirira kubuda kweropa kwakanyanya. Kana kubatwa kwayo kuchinge kushoma, iwe unozowanzo buda ropa zvakanyanya uye nyore. Ichi ndicho chikonzero kutora ropa rakaonda pamwe ne orlistat kunowedzera mikana yako yekubuda-kubuda ropa zvakanyanya uye kunogona kukuita kuti ubude ropa zviri nyore.
Kumwe kuchengetwa kwehutano kuchakupa zano kuti ugadzirise muyero wevanoonda ropa kuti ugone kuishandisa pamwe ne orlistat. Nekudaro, kunze kwekunge zvichikurudzirwa usambo shandura madhiragi emishonga.
Orlistat kudyidzana nemishonga yeHIV
Iyi inonziwo mishonga yemaARV. Iyo antiretroviral mishonga inopihwa kune vanhu vanotambura nehutachiona hwehutachiona hwehutachiona hweHIV (HIV) kudzikisa huwandu hwehutachiona nekudaro kuwedzera mwero wekupona muvarwere.
Mishonga iyi inosanganisira lopinavir, ritonavir, atazanavir, efavirenz, tenofovir uye emticitabine.
Kana madhiragi aya achitorwa pamwe ne orlistat, zvakanzi antiretroviral virology inoderera saka hutachiona hweHIV hunowedzera panzvimbo. Saka unofanirwa kudzivirira kushandisa orlistat nemishonga yemaARV zvinowirirana.
Kana paine chikonzero chekuvatora pamwe chete, hutachiona hweHIV hunofanira kutariswa zvakanyanya uye kushandisa orlistat kunofanirwa kumiswa kana huwandu hwehutachiona hunowanikwa huchiwedzera.
Orlistat kusangana pamwe nekubata mishonga
Kushungurudza mishonga inonziwo antiepileptic zvinodhaka zvinoshandiswa kuderedza zviratidzo zvekufa / pfari. Mafuta chinhu chakakosha mune vane pfari varwere. Izvi saka zvinotungamira mukuwedzera huremu semhedzisiro yemishonga iyi. Mishonga yekubvuta inosanganisira lamotrigine.
Orlistat kune rumwe rutivi inoderedza kunwa kwemafuta. Kana ikashandiswa pamwe chete nemishonga inorwisa hutavi, orlistat yakanzi ideredze kunwa kwemishonga.
Mamwe anecdotal anoshuma kuti orlistat yakatorwa pamwechete nemishonga yekubata inowedzera kuitika kwekubatwa.
Orlistat kudyidzana necyclosporine
Cyclosporine inonziwo ciclosporin imushonga unodzivirira mushonga. Iyo inoshandiswa kudzivirira muviri kubva pakuramba nhengo mushure mekuiswa.
Kana ikashandiswa pamwechete, orlistat inoderedza zvakanyanya mwero weplasma wecyclosporine. Izvi zvinodaro nekuti orlistat inogona kukanganisa kupinza kwemishonga iyi.
Vamwe vezvekurapa vanokurudzira kusashandisa orlistat pavanenge vachishandisa cyclosporine. Nekudaro, vamwe varapi vanokurudzira kutora cyclosporine anenge maawa matatu mushure mekutora orlistat.
Orlistat kudyidzana ne amiodarone
Izvi zvinoreva anti-arrhythmic mushonga unoshandiswa kudzorera yakajairika kurova kwemoyo pamwe nekuramba wakadzikama uye wenguva dzose mutinhimira.
Orlistat yakaratidzirwa kukanganisa kunwa kweamiodarone muropa. ichi chinovhiringidza chinotungamira kune chisina kujairika kurova kwemoyo iri njodzi huru yehutano.
Orlistat kudyidzana ine levothyroxine
Levothyroxine imushonga unoshandiswa pakurapa yakaderera utachiona zviitiko uye zvakare kurapa mamwe marudzi ezvipenga. Yakaderera utachiona chiitiko chinonzi hypothyroidism uye chinosanganisira zviratidzo zvakaita seKuneta, ganda rakaoma, kukanganisika ndangariro, kurema kuwedzera, hoarseness, kushomeka kwemhasuru, yakakwira ropa cholesterol cholesterol, inorema kupfuura zvakajairwa kana zvisina kujairika kumwedzi, yakaderera kurova kwemoyo, kushushikana uye goiters .
Co-manejimendi ye levothyroxine uye orlistat yakanzi ideredze mwero we levothyroxine inopindwa. Orlistat inonzi inosunga kune levothyroxine nokudaro, ichivhara kunamwa kwayo mumatumbu. Izvi zvinogona kukonzeresa zvakanyanya hypothyroidism izvo zvinogona kukonzeresa kumatambudziko ehutano sekushaya mbereko, kufutisa, kurwadziwa, uye kusagadzikana kwemoyo.
Orlistat kudyidzana nemafuta-soluble mavhithamini
Orlistat inogona kudzivisa kunwa kwemamwe mavhitamini ane mafuta uye nezvimwe zvinovaka muviri. Mavhitamini akasanganiswa nemafuta anosanganisira mavitamini A, D, E, K uye beta-carotene.
Zvinokurudzirwa kwazvo kutora multivitamin yekuwedzera ine mavhitamini-akasviba mavhitaminzi. Iyo multivitamin yekuwedzera inofanirwa kutorwa kanokwana maawa maviri pamberi kana mushure mekutora orlistat.
Orlistat Side mhedzisiro
Iwo anowanzozivikanwa orlistat mhedzisiro anoitika nekuda kwemafuta asina kugayiwa achipfuura nepakuzeya kwako system. Iwo anowanzo ari gastrointestinal mhedzisiro sezvo nzira yekutanga ye orlistat iri yemumuromo uye iwo asina kuchinjika mafuta anowedzerwa mune mutsvina.
Iyo orlistat mhedzisiro inoitika mukati memavhiki ekutanga ekutora uye inogona kuenda. Zvisinei, zvimwe zviratidzo zvinogona kuramba zvichiramba. Iyo mhedzisiro mhedzisiro inogona kuitika kazhinji kana iyo dosi isiriyo.
Iyi mhedzisiro inogona kukundwa nekutora yakaringana mishonga iwe uchitevera kuraira kwechiremba wako pakuchengeta yakadzikira koriori, yakaderera-mafuta kudya pamwe nekurovedza muviri.
Iyo yakakurudzirwa orlistat muyero ndeye 120 mg inotorwa katatu zuva nezuva. Orlistat inofanirwa kutorwa isati yadya sezvo inowanzo dzivirira ingangoita 30% yemafuta ekudya kubva mukudyiwa. Doses yepamusoro orlistat haina kukonzeresa kune mamwe masimba asi inogona kutungamira kune mamwe madambudziko.
Iyi orlistat mhedzisiro inosanganisira;
Inokurumidza kana kunetsa kudzora ura kufamba
Akasununguka uye anowanzo wedzera ura kufamba
Mafuta kana zvigadzirwa zvemafuta
Abdominal kana rectum kurwadziwa kana kunyangwe dumbu kusagadzikana
Kupfuudza gasi kazhinji nemafuta ane tsvina.
Iyi yepamusoro orlistat mhedzisiro inogona kuwedzera kana iwe ukatora mamwe mafuta kupfuura iwe aunofanirwa kutora kana uri pa orlistat mishonga.
Mimwe orlistat mhedzisiro yakaipa kunyange isingawanzo kuitika. Iwe unorayirwa kuti utsvage rubatsiro rwechiremba nekukasira kana iwe ukaona izvi mhedzisiro. Aya orlistat mhedzisiro yakaipa inogona kuitika kune yakanyanya dhizaini yemushonga. Migumisiro yakaipa inosanganisira;
Kuwana zvichinetsa kufema
Dumbu rakanyanya kurwadziwa risingapere
Kuzvimba (kunyanya mururimi, pahuro kana kumeso).
Sezvo zvimwe zviitiko zvisingawanzoitika zvekukuvara kwechiropa kwakabatanidzwa nekushandisa orlistat, ita shuwa kuti unotarisa zviratidzo zvekukuvara kwechiropa. Iwe unofanirwa kumira nekukurumidza uye utsvage rubatsiro rwechiremba kana iwe ukaona zvinotevera zvinogona kuitika zviratidzo zvekukuvara kwechiropa;
Mikoko kana yakaoma uye inoramba ichikurudzira
Kusvipa kana kusvotwa
Jaundice (yero yeziso kana ganda)
Chiedza-chena / pendi zvituru
Kuzvimba mumakumbo kana makumbo.
Isu takanyora akawanda orlistat mhedzisiro uye kunyangwe yakashata inosangana nayo, zvisinei, gara uine shungu yekucherechedza chero mhedzisiro iwe yaungasangana nayo uye utaure kune wako wekuchengeta hutano mupi. Ive neshuwa yekutevera mirairo zvakaringana pamadhigisi uye kushandiswa kwakakodzera kweorlistat kuti ubvise yakawanda yemhedzisiro iyi.
Kufanana nemishonga yakawanda, iyo mhedzisiro inogona kuitika pakutanga kwekurapa uye kupera nekuenderera mberi nekushandisa zvakadaro, mimwe mhedzisiro inogona kuramba iripo. Kuwedzeredza ndeimwe inowanzopa kukonzeresa kumatambudziko mazhinji, saka iwe hautore yakawanda yeorlistat kupfuura yakurudzirwa.
Kupi Tenga Orlistat?
Zvigadzirwa zvine orlistat zvinoitika mune akasiyana mazita eorlistat mazita. Izvi zvinodaro nekuti vagadziri veorlistat vanosiyana pamwe nekusungwa.
Iyo yakaderera dosi ye orlistat inoitika mumazita eorlistat mazita akadai saAlli naOlsos. Izvi zvinogona kutengwa zviri nyore pamhepo kubva kune akawanda orlistat vagadziri uye orlistat vatengesi. Nekudaro, iwe paunofunga orlistat zvitenge kubva kune vanogamuchirwa vafemesi. CMOAPI ndeimwe yeanogadzira orlistat uye inopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Iyo CMOAPI kambani yanga iri mubhizinesi kwenguva refu uye nekudaro inovimbisa mhando uye yakanyatsoiswa mumapepa orlistat.
Iva wakangwarira zvakanyanya nepamusoro-pe-zvinodhaka zvinodhaka. Verenga zvinyorwa zvacho nokungwarira kuti unzwisise mashandisirwo akafanira emishonga. Tarisa uone orlistat inogadzira kana neimwe nzira iyo orlistat vatengesi, zuva rekugadzirwa pamwe nezuva rekupera. Ive neshuwa yekutarisawo chero mhedzisiro inoratidzwa uye yambiro. Semuenzaniso, orlistat kukuvara kwechiropa ndeimwe yambiro kana kuti zviratidziro neKudya neDrug Administration (FDA) yevashandisi kutora matanho pavanotora mishonga.
"US orlistat chitaridzi" (PDF). FDA. Nyamavhuvhu 2015. Kudzoreredzwa 18 Kubvumbi 2018. Kuti uwane zvinyorwa patsva ona FDA index peji reNDA 020766
Barbier P, Schneider F (1987). "Syntheses ye tetrahydrolipstatin uye mhedzisiro yekugadziriswa kwe tetrahydrolipstatin uye lipstatin". Helvetica Chimica Acta. 70 (1): 196-202. doi: 10.1002 / hlca.19870700124.
Bodkin J, Humphries E, McLeod M (2003). "Iyo yakazara synthesis ye (-) - tetrahydrolipstatin". YeAustralia Nhoroondo yeKemistry. 56 (8): 795-803. doi: 10.1071 / CH03121.
Filippatos, Theodosios & Derdemezis, Christos & Gazi, Irene & Nakou, Eleni & Mikhailidis, Dimitri & Elisaf, Moses. (2008). Orlistat-Yakabatana Yakashata Mhedzisiro uye Kubatana Kwemishonga. Kuchengetedzwa kwezvinodhaka. 31. 53-65. 10.2165 / 00002018-200831010-00005.
Sharma, AM, & Golay, A. (2002). Mhedzisiro ye orlistat-inokonzera kurasikirwa uremu pakudzvanywa kweropa uye nemoyo kurovera kune vakafutisa varwere vane hypertension. Chinyorwa cheBP, 20(9), 1873–1878. doi.org/10.1097/00004872-200209000-00034.
Yakarongedzwa nekadiki kari pane kavha, uye bhawa pamusoro pe i (ndokuti, "allī"), asi yakadomwa zvakajairwa musangano.
Zhi J, Melia AT, Eggers H, Joly R, Patel IH (1995). "Kuongorora kushomeka kwehurongwa hwekubatisisa orlistat, lipase inhibitor, mune vanhu vane hutano vanozvipira". J Clin Pharmacol. 35 (11): 1103–8. doi: 10.1002 / j.1552-4604.1995.tb04034.x. PMID 8626884.
Kwete.27 Keyuan Street, Dunhu Rokubudirira Kwehupfumi, Dunhu reShanghe, Jinan Guta, Shandong Province
www.aasraw.com www.apicmo.com www.vapeworld.com
Kana uine mubvunzo.
ndapota taura na [email inodzivirirwa]
© 2020 cmoapi.com. Kodzero Dzese dzakachengetedzwa. Disiki: Isu hatiite chero zvirevo nezve zvigadzirwa zvinotengeswa pawebhusaiti ino. Hapana ruzivo rwakapihwa pane ino webhusaiti rwakaongororwa neDFA kana MHRA. Chero ruzivo rwunopihwa pane ino webhusaiti rwunopihwa kune rwakanakisa ruzivo rwedu uye haruna kuitirwa kutsiva rairo yemurapi anokwanisa. Chero hupi hupupuriro kana ongororo yechigadzirwa yakapihwa nevatengi vedu haisiri iwo maonero e cmoapi.com uye haifanire kutorwa sekurudziro kana chokwadi.